Ambohipiadanana : Fraternité Sainte Thérèse – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ambohipiadanana : Fraternité Sainte Thérèse
Ny « Fraternité Franciscaine » dia ivon-toerana mandray ireo zazavavikely tra-pahasahiranana sy tandidonin-doza ny lafiny fanabeazana, fahasalamana, fiainana maha olona fa indrindra ny fitondra-tenan’izy ireo. Anisan’ny tanjona kendren’ny Fikambanan’ny Relijiozy mantsy ny fisorohana ny firosoan’ny zazavavy ho amin’ny fitondra-tena tsy mendrika.
Rehefa nahazo fahazoan-dalana avy amin’ny Fikambanamben’ny Relijiozy sy ny Arsevekan’Antananarivo Razanakolona Odon dia natsangan’ i Mgr. Georges sy ny Père Curé Distrikan’Ambohijanaka Jacques Léonce ny ivon-toerana ny 07 Novambra 2010 teny Ambohipiadanana. Niara-nisalahy tamin’izy ireo nandritra izany ry Masera Elsy Mathéo, Angeline ary Charline.
Ny 01 Oktôbra 2011 izay fetin’I Mb Terezy, dia efa nandray zazavavy miisa dimampolo sahady ry Masera. Notsofin’ I Père Ludovic Vikera Jeneraly, rano kosa ny Ivon-toerana ny 30 Novambra 2011 izay natrehana pretra nahatratra hatramin’ny 17, sy Relijiozy maro ary ireo mpanao soa ny paroasy.
Fotoana kely taty aoriana dia nanokatra toerana famahanan-kanina ireo zokiolona ry Masera ary ivon-toerana fianarana asa ho an’ireo reny mananon-tena sy tanora tsy mianatra intsony.
Fa misokatra ho an’ny besinimaro kosa ny eny Ambohipiadanana rehefa faran’ny herinandro ho an’ireo mahatsiaro tena mila fandinihan-tena na fialan-tsasatra kely.
[Best_Wordpress_Gallery gallery_type= »slideshow » theme_id= »1″ gallery_id= »1″ sort_by= »order » slideshow_effect= »fade » slideshow_interval= »5″ slideshow_width= »800″ slideshow_height= »500″ enable_slideshow_autoplay= »0″ enable_slideshow_shuffle= »0″ enable_slideshow_ctrl= »1″ enable_slideshow_filmstrip= »1″ slideshow_filmstrip_height= »90″ slideshow_enable_title= »0″ slideshow_title_position= »top-right » slideshow_enable_description= »0″ slideshow_description_position= »bottom-right » enable_slideshow_music= »0″ slideshow_music_url= » » watermark_type= »none » watermark_link= »http://web-dorado.com »]
AFFA – Amboaram-Peon’ny Fitiavana Anjomakely